China Welded Birta Rebar Sheet Sheet iyo saarayaasha |Zhanzhi
Shabakadda birta alxanka leh waa go'a mesh kaas oo xoojinta dhererka iyo xoojinta leexleexdu ay ku habaysan yihiin masaafo gaar ah iyo xaglo toosan oo midba midka kale ah, dhammaan isgoysyaduna waa la wada alxanayaa.
Waa in laga sameeyaa CRB550 darajo qabow duuban bir duuban ama HRB400 heerkul kulul oo feeraha duuban, ama CPB550 qaboojiye rebar bir siman oo siman.
1) Qalabka: HRB400, CRB550, iwm.
3) Daaweynta dusha sare: madow, ama galvanized
Sida laga soo xigtay alaabta ceeriin, xaashida birta rebar ee welded waxaa loo qaybin karaa qaboojiyaha duuban ee qaboojiyaha, qaboojiyaha wareegsan ee birta rebar ka samaysan iyo xaashi kulul oo duuban, oo ay ka mid yihiin qabowga duuban ee birta rebar. xaashida mesh waa tan ugu isticmaalka badan.Marka loo eego darajada, dhexroorka, dhererka iyo kala dheeraynta birta birta rebar, xaashida mesh birta alxanka leh waxa loo qaybin karaa laba nooc: xaashi bir alxanka leh oo qaabaysan iyo xaashi bir alxanka leh oo habaysan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira laba nooc oo ah xaashida birta welded: geeso qallafsan iyo geeso nadiif ah.
Shabakadda muraayadda birta ee alxanka leh waxaa badanaa loo adeegsadaa xawaaraha-sare iyo hoos-u-dhigga tareenka;Dabaqa aqoon isweydaarsiga warshadaha;Mashruuca ilaalinta biyaha;Deked deked;Dabaqa dhismaha ganacsiga;Aqoon-is-weydaarsiga qaab-dhismeedka birta;Guddiga xoojinta dhismaha.
Shabakadda birta welded waxay si weyn u wanaajin kartaa tayada injineernimada birta, waxay wanaajin kartaa xawaaraha dhismaha waxayna wanaajin kartaa awoodda ka-hortagga dildilaaca ee shubka, waxayna leedahay faa'iidooyin dhaqaale oo dhammaystiran oo wanaagsan.
Waxqabadka farsamada iyo faa'iidooyinka xaashida rebar birta alxanka leh:
1.Waxay si weyn u dhimi kartaa saacadaha-man-saacda ee rakibaadda birta rebar, taas oo 50% -70% ka yar kan mesh-xidhka.
2.With dheereynta xoojinta cufan, xoojinta dhererka iyo xoojinta transverse ee xaashida rebar mesh birta welded waxay sameeyaan qaab dhismeedka mesh si ay u ciyaaraan doorka isku-xidhka iyo isku-xidhka wadajirka ah, taas oo faa'iido u leh si looga hortago dhacdooyinka iyo horumarinta dildilaaca la taaban karo.Shabakadda alxanka ee birta alxanka ee ku taal laamiga, sagxada iyo sagxada waxay yarayn kartaa dildilaaca dusha sare ee shubka ilaa 75%.
3.Waxay si gaar ah ugu habboon tahay mashaariicda la taaban karo ee ballaaran.Baaxadda shabagga ee xaashida rebar ee birta welded aad bay caadi u tahay, aad ayey uga badan tahay mesh-xidhka gacanta.Meshku wuxuu leeyahay qallafsanaan sare iyo barti wanaagsan.Marka shubka la shubayo, birta birta ah ma fududa in la leexiyo, la beddelo oo simbiriirixan loo sameeyo.Dhumucda lakabka ilaalinta la taaban karo waa sahlan tahay in la xakameeyo iyo lebbiska, taas oo si cad u hagaajinaysa tayada mashaariicda la xoojiyay.
4. xaashida dahaadhka ee birta alxanka leh waxay leedahay faa'iidooyin dhaqaale oo dhamaystiran oo wanaagsan.